ओलीलाई प्रचण्डले फोन गरेर भने : 'यो के तमासा गर्नुभएको?' - Himali Patrika
ओलीलाई प्रचण्डले फोन गरेर भने : ‘यो के तमासा गर्नुभएको?’
हिमाली पत्रिका ३१ बैशाख २०७८, 8:49 am
काठमाडौं। माधव नेपाललगायत चार नेतालाई निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई फोन गरेर यो के तमासा गर्नुभएको ? भनेका थिए। उनले तपाईंले त निलम्बन फुकुवा गर्नुभएछ, कारबाही फुकुवा गर्नुभएछ, तपाईं कारबाही फुकुवा गर्ने खालको मानिस त होइन किन यसो गर्नुभयो रु भनेर जिज्ञासा राखेका थिए।
ओलीसँग हारे देउवा र प्रचण्ड
७३ मा तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धन तोडेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन गराउने सन्दर्भमा निधि गेम चेञ्जरकै रुपमा देखिएका थिए ।
देउवाले उपसभापति निधि, नेता कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल लगायतलाई अगाडि नसारेर कमजोरी गरेको काँग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पक्ष राम्रोसँग बुझेका र विश्वास गरेका नेताहरुको टोली बनाउन देउवा चुक्दा यस्तो अवस्था आएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
माधव नेपाल पक्षमाथि बढी विश्वास
काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि बुझाइ रातोपाटीकर्मीसँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा राखेका थिए । ठाकुरसँग काँग्रेस नेताहरुले गम्भीर वार्ताको आवश्यकता पनि ठानेको देखिएको थिएन ।